လဖိုင်| December 18, 2012 | Hits:10,220
hlaing December 18, 2012 - 8:00 pm good new
Reply Salai Lian December 18, 2012 - 11:15 pm Retaliation is notagood thing. We condemn when Burmese troops are attacking Kachins. When KIA retaliates by attacking Police Station, both sides are doing the same wrongdoing.
Reply naymin December 19, 2012 - 2:17 pm ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နမ္မတီးအတွက် 390 တောင်ကုန်းမှာထိုင်ထားတဲ့ စကခမှူးဟာ သဘောထားပျောင်းလို့ပါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာတောင်တွင်းကြီးသား ခရစ်ယာဘာသာဝင်တယောက်ကြောင့်ဘဲးးးးးးးးးနောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းတွေတော့ရှိဦးမယ် Reply wanna December 26, 2012 - 3:45 pm မြန်မာပြည်သားတွေ အဲ့ဒါ မကောင်းတာ.
Reply wanna December 26, 2012 - 3:46 pm ဘာသာရေးကို ထည့်ထည့်ပြောတာက နိုင်ငံရေး မဆန်ဘူးထင်တယ်